‘Uchenjeri hwaMwari Hunobva Kumusoro’ Huri Kushanda Muupenyu Hwako Here? | Swedera Pedyo
1-3. (a) Soromoni akaratidza sei uchenjeri hunoshamisa munzira yaakabata nayo nebopoto rokurwira mwana? (b) Jehovha anotivimbisa kutipa chii, uye mibvunzoi inomuka?
YAKANGA iri nyaya yakaoma—vakadzi vaviri vachiitirana nharo pamusoro pomwana. Vakadzi vacho vaigara pamusha mumwe, uye vose vakanga vabereka vanakomana vakanga vakangosiyana nemazuva mashomanana. Mumwe mwana wacho akanga afa, zvino mumwe nomumwe wevakadzi vaviri ava aiti mwana mupenyu ndewake. * Pakanga pasina zvimwe zvapupu zvakanga zvaona zvakaitika. Pamwe nyaya yacho yakanga yatongwa mudare duku asi ikatadza kugadziriswa. Pakupedzisira, bopoto racho rakaendeswa kuna Soromoni, mambo waIsraeri. Aizokwanisa kubudisa chokwadi here?
2 Pashure pokuteerera kwechinguva vakadzi vacho vachikakavadzana, Soromoni akarayira kuti bakatwa riunzwe. Ipapo achiratidza seari kutorevesa, akarayira kuti mwana wacho achekwe kuita zvidimbu zviviri, mukadzi mumwe nomumwe opiwa hafu. Pakarepo, amai chaivo vakateterera mambo kuti ape mwana wacho—mwana wake anokosha—kune mumwe mukadzi wacho. Asi mumwe mukadzi wacho akaramba achingoti mwana ngaachekwe kuita zvidimbu zviviri. Soromoni zvino akanga ava kuziva chokwadi. Aiziva mwoyo wokubereka waamai kumwana wavakabereka, uye akashandisa zivo iyoyo kugadzirisa bopoto iri. Fungidzira kuti amai vacho vakazorodzwa sei Soromoni paakavapa mwana ndokuti: “Ndivo mai vake.”—1 Madzimambo 3:16-27.
3 Hwakanga huri uchenjeri hunoshamisa, handizvo here? Vanhu pavakanzwa matongero akanga aita Soromoni nhau yacho, vakashamiswa, “nokuti vakaona kuti kungwara kwaMwari kwaiva maari.” Hungu, uchenjeri hwaSoromoni chakanga chiri chipo chakabva kuna Mwari. Jehovha akanga amupa “mwoyo wakangwara, unonzwisisa.” (1 Madzimambo 3:12, 28) Asi zvakadini nesu? Nesuwo tingagamuchira uchenjeri hwaMwari here? Hungu, nokuti achifuridzirwa, Soromoni akanyora kuti: “Jehovha ndiye unopa uchenjeri.” (Zvirevo 2:6) Jehovha anopikira kupa uchenjeri—mano okushandisa zvakanaka zivo nokunzwisisa—kune avo vanohutsvaka nomwoyo wose. Tingawana sei uchenjeri hunobva kumusoro? Uye tingahushandisa sei muupenyu hwedu?
4-7. Ndezvipi zvinhu zvina zvinodiwa kuti tiwane uchenjeri?
4 Tinofanira kuva noungwaru chaizvo here kana kuti kuva vakadzidza zvikuru kuti tigamuchire uchenjeri hwaMwari? Aiwa. Jehovha anoda kutipa uchenjeri pasinei nekwatakabva kana dzidzo. (1 VaKorinde 1:26-29) Asi isu tinofanira kutanga kuita chimwe chinhu, nokuti Bhaibheri rinotikurudzira kuti ti“zviwanire uchenjeri.” (Zvirevo 4:7) Tingaita sei kudaro?
5 Kutanga, tinofanira kutya Mwari. “Kuvamba kwouchenjeri [“nhano yokutanga yokuenda kuuchenjeri,” The New English Bible] ndiko kutya Jehovha,” inodaro Zvirevo 9:10. Kutya Mwari ndihwo hwaro hwouchenjeri hwechokwadi. Nei? Yeuka kuti uchenjeri hunobatanidza mano okushandisa zivo zvinobudirira. Kutya Mwari, hakusi kuzvipeta pamberi pake nokutya, asi kukotamisa uso pamberi pake nokuremekedza kukuru, uye chivimbo. Kutya kwakadaro kwakanaka uye kunokurudzira zvine simba. Kunotiita kuti tiwiriranise upenyu hwedu nokuziva kwedu kuda kwaMwari nenzira dzake. Hapana nzira youchenjeri inopfuura iyi yatingatora, nokuti mitemo yaJehovha nguva dzose inosimudzira zvakanakisisa kune vanoitevera.
6 Chechipiri, tinofanira kuzvininipisa nokuva vane mwero. Uchenjeri hwaMwari hahugoni kuvapo pasina kuzvininipisa nokuva nomwero. (Zvirevo 11:2) Nei zvakadaro? Kana tichizvininipisa uye tine mwero, tinoda kubvuma kuti hatizivi zvose, kuti mafungiro edu handiwo akarurama nguva dzose, uye kuti tinofanira kuziva zvinofungwa naJehovha panhau. Jehovha “anodzivisa vanozvikudza,” asi anofara kupa uchenjeri kune vanozvininipisa pamwoyo.—Jakobho 4:6.
Kuti tiwane uchenjeri hwaMwari, tinofanira kushanda kuhuchera
7 Chechitatu chinokosha kudzidzwa kweShoko raMwari rakanyorwa. Uchenjeri hwaJehovha hunoziviswa muShoko rake. Kuti tiwane uchenjeri ihwohwo, tinofanira kushandisa simba kuhuchera. (Zvirevo 2:1-5) Chechina chinodiwa munyengetero. Kana tikakumbira Mwari uchenjeri nomwoyo wose, achatipa hwakawanda. (Jakobho 1:5) Minyengetero yedu yokukumbira kubatsirwa nomudzimu wake haizoregi kupindurwa. Uye mudzimu wake unogona kutiita kuti tiwane pfuma iri muShoko rake inogona kutibatsira kugadzirisa zvinetso, kunzvenga ngozi, nokuita zvisarudzo zvokuchenjera.—Ruka 11:13.
8. Kana takawana uchenjeri hwaMwari zvechokwadi, zvichaonekwa sei?
8 Sezvinoratidzwa muChitsauko 17, uchenjeri hwaJehovha hunoshandisika. Nokudaro, kana takawana zvechokwadi uchenjeri hwaMwari, zvichava pachena munzira yatinozvibata nayo. Mudzidzi Jakobho akarondedzera zvibereko zvouchenjeri hwaMwari paakanyora kuti: “Uchenjeri hunobva kumusoro kutanga hwakachena, uyewo hune rugare, hunonzwisisa, hunoda kuteerera, huzere nengoni nezvibereko zvakanaka, hahusaruri, hahunyengeri.” (Jakobho 3:17) Sezvatinokurukura pamusoro pechimwe nechimwe chezviri uchenjeri hwaMwari izvi, tingazvibvunza kuti, ‘Uchenjeri hunobva kumusoro huri kushanda muupenyu hwangu here?’
“Hwakachena, Uyewo Hune Rugare”
9. Zvinorevei kuva akachena, uye nei zvakakodzera kuti kuchena ndiko kunotanga kutaurwa pane zvakaita uchenjeri?
9 “Kutanga hwakachena.” Kuchena kunoreva kusava nechaunopomerwa uye kusasviba kwete bedzi kunze asi mukati. Bhaibheri rinobatanidza uchenjeri nomwoyo, asi uchenjeri hwokudenga hahugoni kupinda mumwoyo wakasvibiswa nemafungiro akaipa, zvishuvo, uye vavariro. (Zvirevo 2:10; Mateu 15:19, 20) Zvisinei, kana mwoyo wedu wakachena—ndiko kuti, sezvinobvira kuvanhu vasina kukwana—ticha“bva pane zvakaipa, [toita] zvakanaka.” (Pisarema 37:27; Zvirevo 3:7) Hazvina kukodzera here kuti kuchena ndiko kunotanga kutaurwa pakurondedzera zvakaita uchenjeri? Pamusoro pazvo, kana tisina kuchena mutsika nomumudzimu, tingaratidza sei zvechokwadi zvakaita uchenjeri hunobva kumusoro?
10, 11. (a) Nei zvichikosha kuti tive vanhu vorugare? (b) Kana ukaona kuti wagumbura hama yako, ungaratidza sei kuti uri munhu worugare? (Onawo mashoko omuzasi.)
10 “Uyewo hune rugare.” Uchenjeri hwokudenga hunotiita kuti titevere rugare, urwo ruri chibereko chomudzimu waMwari. (VaGaratiya 5:22) Tinoedza kuti tisaparadza “chisungo chinobatanidza” vanhu vaJehovha chorugare. (VaEfeso 4:3) Tinoedzawo nepose patinogona napo kudzosa rugare parunenge rwavhiringidzwa. Nei izvi zvichikosha? Bhaibheri rinoti: “Rambai . . . muchigara norugare; uye Mwari worudo neworugare achava nemi.” (2 VaKorinde 13:11) Naizvozvo chero bedzi tikaramba tichigara norugare, Mwari worugare achava nesu. Ukama hwedu naJehovha hunoenderana nenzira iyo tinobata nayo hama dzedu. Tingaratidza sei kuti tinochengeta rugare? Ona muenzaniso.
11 Unofanira kuitei kana ukanzwa kuti wagumbura hama yako? Jesu akati: “Zvino, kana uri kuunza chipo chako kuatari wobva wayeuka ipapo kuti hama yako ine mhosva newe, siya chipo chako ipapo pamberi peatari, uende; tanga waita rugare rwako nehama yako, uye ipapo, paunenge wadzoka, ipa chipo chako.” (Mateu 5:23, 24) Unogona kushandisa zano iroro nokutanga kuenda kuhama yako. Nechinangwa chei? Kuti uite “rugare rwako” nayo. * Kuti zvidaro, ungada kubvuma, kwete kuramba, kurwadziwa kwayo. Kana ukaenda kwairi une vavariro yokudzorera rugare uye woramba une pfungwa iyoyo, pamwe kusanzwisisana kwose kunogona kugadziriswa, kukumbira ruregerero kwakakodzera kwoitwa pova nokuregererana. Paunotanga iwe kuti uite rugare, unoratidza kuti unotungamirirwa nouchenjeri hwaMwari.
“Hunonzwisisa, Hunoda Kuteerera”
12, 13. (a) Shoko rakashandurwa kuti “hunonzwisisa” pana Jakobho 3:17 rinorevei? (b) Tingaratidza sei kuti tinonzwisisa?
12 “Hunonzwisisa.” Kunzwisisa zvinorevei? Maererano nenyanzvi dzeBhaibheri, shoko rechiGiriki chepakuvamba rinoshandurwa kuti “hunonzwisisa” pana Jakobho 3:17 rakaoma kushandura. Vashanduri vakashandisa mashoko akadai sokuti “unyoro,” “kuzvidzora,” uye “kufunga vamwe.” Shoko rechiGiriki sezvariri rinoreva “kuzvirereka.” Tingaratidza sei kuti pfungwa iyi youchenjeri hunobva kumusoro iri kushanda matiri?
13 “Kunzwisisa kwenyu ngakuzivikanwe nevanhu vose,” inodaro VaFiripi 4:5. Imwe shanduro inoti: “Ivai nomukurumbira wokuva vanonzwisisa.” (The New Testament in Modern English, naJ. B. Phillips) Cherechedza kuti haisi nyaya yokuti isu tinoona sei zvatiri; nyaya iri pakuti vamwe vanotiona sei, kuti tinozivikanwa sei. Munhu anonzwisisa haarambi achiomerera pakutevera mutemo zvisina mwero kana kuti, pakuti zvake zviitwe. Pane kudaro, anoda kuteerera vamwe uye pazvinenge zvakakodzera, kubvuma zvido zvavo. Uyewo munyoro, haana hasha mukubata kwake nevamwe. Kunyange zvazvo izvi zvichikosha kuvaKristu vose, zvinotonyanya kukosha kune avo vari kushanda sevakuru. Unyoro hunokwezva, huchiita kuti vakuru vave nyore kutaura navo. (1 VaTesaronika 2:7, 8) Zvakanaka kuti tose tizvibvunze kuti, ‘Ndine mukurumbira wokurangarira vamwe, wokuzvirereka, uye wokuva munyoro here?’
14. Tingaratidza sei kuti ti“noda kuteerera”?
14 “Hunoda kuteerera.” Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “hunoda kuteerera” harina pamwe parinowanikwa muMagwaro echiKristu echiGiriki. Maererano neimwe nyanzvi, shoko iri “rinowanzoshandiswa mune zvechiuto.” Rinopa pfungwa “yokuva nyore kunyengetedza” uye “kuzviisa pasi.” Uyo anodzorwa nouchenjeri hunobva kumusoro anokurumidza kubvuma zvinotaurwa neMagwaro. Haazivikanwi somunhu anosarudza kuita chimwe chinhu asi oramba kushandisa zvinopesana nokuda kwake. Asi, akagadzirira kuchinja kana akapiwa uchapupu hweMagwaro hwakajeka hwokuti aita zvisina kururama kana kuti afunga zvisizvo. Iwayo ndiwo mazivirwe aunoitwa nevamwe here?
“Huzere Nengoni Nezvibereko Zvakanaka”
15. Ngoni chii, uye nei zvakakodzera kuti “ngoni” ne“zvibereko zvakanaka” zvinotaurwa pamwe chete pana Jakobho 3:17?
15 “Huzere nengoni nezvibereko zvakanaka.” * Ngoni rutivi runokosha rwouchenjeri hunobva kumusoro, nokuti uchenjeri hwakadaro hunonzi “huzere nengoni.” Cherechedza kuti “ngoni” ne“zvibereko zvakanaka” zvinotaurwa pamwe chete. Izvi zvakakodzera nokuti muBhaibheri, ngoni kazhinji dzinowanzoreva kuva nehanya nevamwe, tsitsi dzinowanzobereka chibereko chakanaka chezviito zvomutsa. Rimwe bhuku rinorondedzera ngoni so“kunzwa kusiririswa pamusoro penhamo yomumwe nokuedza kuita chimwe chinhu nezvazvo.” Nokudaro, uchenjeri hwaMwari hahusi husina ushamwari, husina tsitsi, kana kuti hwokungova noruzivo. Panzvimbo pezvo, hune ushamwari, hunobva pamwoyo, uye hunorangarira vamwe. Tingaratidza sei kuti tizere nengoni?
16, 17. (a) Kuwedzera pakuda Mwari, chii chinotipa simba rokuita basa rokuparidza, uye nei? (b) Munzirai umo tinogona kuratidza kuti tizere netsitsi?
16 Chokwadi nzira inokosha ndeyokugovana mashoko akanaka oUmambo hwaMwari nevamwe. Chii chinotipa simba rokuita basa iri? Zvikurukuru, kuda Mwari. Asi tinokurudzirwawo nengoni, kana kuti kunzwira vamwe tsitsi. (Mateu 22:37-39) Vazhinji nhasi vari ku“batwa zvisina kufanira uye [vakapararira] kufanana nemakwai asina mufudzi.” (Mateu 9:36) Vakaregeredzwa nokupofumadzwa mumudzimu nevafudzi vechitendero chenhema. Somugumisiro, havazivi nezvenhungamiro youchenjeri iri muShoko raMwari kana kuti nezvezvikomborero izvo Umambo huchaunza nokukurumidza pasi pano. Nokudaro patinofunga pamusoro pezvinodiwa zvomudzimu zvevakatipoteredza, tsitsi dzedu dzinobva pamwoyo dzinotipa simba rokuita zvose zvatinogona kuti tivaudze nezvechinangwa chorudo chaJehovha.
Patinoitira vamwe tsitsi, tinoratidza “uchenjeri hunobva kumusoro”
17 Ndedzipi dzimwe nzira dzatingaratidza nadzo kuti tizere netsitsi? Yeuka muenzaniso waJesu womuSamariya akawana mumwe munhu aifamba akati rabada parutivi pomugwagwa arohwa nokubirwa nematsotsi. Anzwa tsitsi muSamariya “akamuitira ngoni,” achisunga maronda ake nokumutarisira. (Ruka 10:29-37) Izvi hazviratidzi here kuti ngoni dzinosanganisira kunyatsobatsira vari kutambura? Bhaibheri rinotiudza kuti tiitire “vose zvakanaka, asi zvikurukuru vaya vane ukama nesu mukutenda.” (VaGaratiya 6:10) Funga pamusoro pezvimwe zvinobvira. Imwe hama yakwegura ingada chokufambisa kuenda nokudzoka kumisangano yechiKristu. Imwe chirikadzi iri muungano ingada kubatsirwa kugadzira zvimwe zvinhu zvakafa pamba payo. (Jakobho 1:27) Mumwe munhu akaora mwoyo angada “shoko nyoro” rokumukurudzira. (Zvirevo 12:25) Patinoratidza ngoni munzira dzakadai, tinopa uchapupu hwokuti uchenjeri hunobva kumusoro huri kushanda matiri.
18. Kana tichitungamirirwa nouchenjeri hunobva kumusoro, chii chatinofanira kuvavarira kudzura mumwoyo yedu, uye nei?
18 “Hahusaruri, hahunyengeri.” Uchenjeri hwaMwari hunopfuura rusaruraganda nokuzvikudza kworudzi. Kana tichitungamirirwa nouchenjeri hwakadaro, tinoedza kudzura mumwoyo yedu tsika yokuratidza rusarura. (Jakobho 2:9) Hatibati vamwe zvakanaka kupfuura vamwe nemhaka yedzidzo yavo, mari yavo, kana kuti basa ravo muungano; uyewo hapana imwe yehama dzedu yatinotarisira pasi, pasinei nokuti vangaratidza sevakaderera zvakadini. Kana Jehovha akada vanhu vakadaro, chokwadi tinofanira kuvaona vakakodzera kuti tivade.
19, 20. (a) Shoko rechiGiriki rinoshandurwa kuti “munyengeri” rakabva nepi? (b) Tinoratidza sei “kudanana . . . kwazvo sehama kusina unyengeri,” uye nei izvi zvichikosha?
19 “Hahunyengeri.” Shoko rechiGiriki rokuti “munyengeri” rinogona kureva “mutambi aiva mumutambo.” Munguva dzekare, vatambi vechiGiriki nevechiRoma vaipfeka masiki huru pavainge vachiita mutambo. Nokudaro, shoko rechiGiriki rinoreva “munyengeri” rakasvika pakushanda kumunhu aibata kumeso, kana kuti munhu ainyepera kuva zvaasiri. Pfungwa iyi youchenjeri hwaMwari haifaniri kungodzora mabatiro chete atinoita vatinonamata navo asiwo manzwiro atinoita pamusoro pavo.
20 Muapostora Petro akacherechedza kuti “kuteerera [kwedu] chokwadi” kunofanira kuguma “nokudanana . . . kwazvo sehama kusina unyengeri.” (1 Petro 1:22) Hungu, kuda kwedu hama dzedu hakufaniri kupfekwa zvechipameso. Hatipfeki masiki kana kuti kuedzesera kuva mumwe munhu kuti tinyengedze vamwe. Rudo rwedu runofanira kuva rwechokwadi, runobva pamwoyo. Kana rwakadaro, tichavimbwa nehama dzedu, nokuti vachaziva kuti tiri zvatinoratidzika kuva chaizvo. Kuva womwoyo wose kwakadaro kunozarurira nzira ukama hwokutendeka hwokubudirana pachena pakati pevaKristu uye kunobatsira kuti pave nokuvimbana muungano.
“Chengeta Uchenjeri Chaihwo”
21, 22. (a) Soromoni akatadza sei kuchengeta uchenjeri? (b) Tingachengeta sei uchenjeri, uye tichabatsirwa sei nokuita kudaro?
21 Uchenjeri hwaMwari chipo chinobva kuna Jehovha, chinhu chatinofanira kuchengeta. Soromoni akati: “Mwanakomana wangu, . . . chengeta uchenjeri chaihwo nokungwara.” (Zvirevo 3:21) Zvinosiririsa kuti Soromoni pachake akakundikana kuita kudaro. Akaramba akachenjera chero bedzi aichengeta mwoyo unoteerera. Asi pakupedzisira, vakadzi vake vokumwe vazhinji vakatsausa mwoyo wake pakunamata Jehovha kwakachena. (1 Madzimambo 11:1-8) Zvakaguma zvaitika kuna Soromoni zvinoratidza kuti zivo haina zvainobatsira kana tikasaishandisa zvakanaka.
22 Tingachengeta sei uchenjeri chaihwo? Hatifaniri kungoverenga Bhaibheri nguva dzose chete nemabhuku anotaura zveBhaibheri atinopiwa no“muranda akatendeka, akangwara” asi tinofanirawo kuedza kuita zvatinodzidza. (Mateu 24:45) Tine zvikonzero zvakasimba kwazvo zvokuti tishandise uchenjeri hwaMwari. Zvinoreva nzira youpenyu iri nani zvino. Zvinoita kuti tikwanise ‘kubatisisa upenyu chaihwo’—upenyu munyika itsva yaMwari. (1 Timoti 6:19) Uye chinokosha kupfuura zvose, kuva nouchenjeri hunobva kumusoro kunotiswededza pedyo netsime rouchenjeri hwose, Jehovha Mwari.
^ ndima 1 Maererano na1 Madzimambo 3:16, vakadzi vacho vakanga vari zvifeve. Insight on the Scriptures rinoti: “Vakadzi ava vangave vaiva zvifeve, kwete zvokutsvaka mari, asi vakadzi vakanga vaita ufeve, vangave vakadzi vechiJudha kana kuti, zvinobvirawo kuti vaiva vakadzi vemamwe marudzi.”—Rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 11 Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “ita rugare rwako” rinobva pashoko rechiito rinoreva “‘kugadziridza, kutsinhana,’ uye nokudaro, ‘kuyanana.’” Naizvozvo chinangwa chako ndechokugadzirisa, kubvisa kuvenga mumwoyo weakagumburwa kana zvichibvira.—VaRoma 12:18.
^ ndima 15 Imwe shanduro yeBhaibheri inoshandura mashoko aya kuti, “huzere netsitsi nezviito zvakanaka.”—A Translation in the Language of the People, yaCharles B. Williams.
Dheuteronomio 4:4-6 Tinoratidza sei kuti takachenjera?
Pisarema 119:97-105 Tichabatsirwa sei kana tikadzidza nokushingaira toshandisa Shoko raMwari?
Zvirevo 4:10-13, 20-27 Nei tichida uchenjeri hwaJehovha?
Jakobho 3:1-16 Avo vakapiwa basa rokutarisira ungano vangaratidza sei kuti vakachenjera uye vanonzwisisa?
Bhaibheri richatibatsira kana tikaridzidza uye tikashandisa zvarinodzidzisa. Ona kuti ungaitei kuti ubatsirwe zvakanyanya nokuverenga Bhaibheri.
Unokoshesa Bhaibheri here? Kudzidza 2 Timoti 3:16 kuchasimbisa kutenda kwaunoita chipo ichi chinobva kuna Jehovha.